KU SAABSAN SIFOOYINKA MIDABKA EE DIGAAGGA "MINORCA" - BEERAHA DIGAAGA
Ilaa hadda, waxaa jira tiro aad u badan oo ah digaagga meelo kala duwan.
Qaar ka mid ah waa kuwo caan ah, qaar weli wali ma helin faafin ballaaran.
Digaagga Minorca ayaa iska leh noocyada yar-yar ee la yaqaan, inkastoo dad tiro yar ay ka og yihiin oo keliya marka laga hadlayo CIS, nooca digaagana waa mid si fiican looga yaqaan Europe.
Minorca Hens aad u qurux badan oo qurux badan, laakiin bannaankeena furan ayaa jira dhowr cayaarood oo ay ka og yihiin. Spain waa meesha uu ku dhashay ee caanahan, si sax ah, Jasiiradda Minorca, halkaas oo digaagga madow, kuwaas oo aad u jecel yahay wakhtigaas, ayaa la soo dhaafay.
Noocani waxa uu helay magaciisa hadda ka dib waqtiga England, halkaas oo xayawaankaas lagu dhaqmo oo wax yar ka soo raysay. Isku dayga ayaa la sameeyey si uu uga samaysto jinsigaan oo ah wakiil aan ka ahayn oo keliya ukunta, laakiin sidoo kale hilib, laakiin isku daygaas ayaa wax u yimid.
Inkasta, si daacad ah, waxay ahayd mid aan macquul ahayn in la sameeyo, tan iyo hilibka digaaga ee Minorok waa mid aad u dhadhan fiican leh, heerkuna wax-soo-saarku waa mid aad u fiican.
Soologayaashu waxay aaminsan yihiin in caanahaani loo saari karo nadiifka, sida wakiilkiisa ama aan ahayn, ama aad u yar oo ka yimaada noocyada kale.
U muuqaalka muuqaalka digaagga ayaa aad u baahan. Waxay leeyihiin madow oo leh cagaaran cagaaran, oo hoos u iftiimaya, taas oo ka dhigaysa fur furan.
Duufaannada iyo digaagga ee ku yaal Minorca ayaa leh midab aad u qurux badan oo casaan ah oo casaan ah, qaab caleen ah oo muuqaal ah, ragga ayaa u dhawaaqaya ilkaha, oo jilicsan.
Xayawaanku waa yar yihiin xajmiga laakiin guurguura, oo leh madax yar iyo qoorta dheer. Jidhku waa yar yahay, laabta ayaa ah mid ballaaran, qiyaastii, garbaha iyo daboolka si fiican ayaa loo horumariyay. Dhabarka waa gaaban yahay, laakiin waa ballaaran yahay.
Adhiciradu waa muddo dheer, roodhida. Indhaha waa bunni, dhexdhexaad ah, wajiga waa casaan. Haddii xayawaanku ku dhajiyo boogaha qoorta, ka dibna tani waa calaamada ugu weyn ee xumaanshaha. Dabeecadda ayaa ah xishoodHa tegin gacmaha dadka, xitaa haddii lala xiriiro waqti dheer.
Tani waxay leedahay saddex laamood: Jarmal, Ingiriis iyo Maraykan. Sida ugu quruxda badan waa nooca labaad. Waxay leeyihiin madax madaxa ah, shanlo ah qaab caleen ah.
Meelaha qiiqa, shanlooyinka ayaa la isku dhejiyaa, hoos ugu dhacaya bartamaha gagaarka. Xayawaanka qaarkood, shanlada waxay leedahay qaabka geedka. Tani waa natiijada joogitaanka digaaga Hamburg ee hiddaha Minorca.
Qaar ka mid ah wakiilada jinsiga Minorca waxay leeyihiin midab cad ama midab leh. Muuqaalkooda gaarka ah - shanlo qurux badan - xayawaankaas ayaa helay natiijo ka timid xulasho dheer.
Xayawaanka digaagga ayaa ah midab-badheedh, qaab, ku-siman xajmiga ukunta qoorta. Inkasta oo digaagga yaryari aanay la xiriirin dadka, xayawaankaas awood u leeyihiin in ay si deggan ugu noolaadaan coop isku mid ah leh noocyada kale ee lakab.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo cudurada digaagga.
Tani tan of digaagana waxaa loo tixgeliyaa waqti hore. Digaagga yaryar waa kuwo aan qabyo ahayn, oo si dhakhso ah u kora. Wax soo saarka ukunta ayaa weli ah heer isku mid ah sanadka oo dhan..
Tirooyinka wax soo saarka ukunta sanadlaha waa 200 oo ukumo sanadkiiba, midkiiba midkiiba 70-80 garaam, cad, oo leh qolof aad u jilicsan.
Miisaanka shimbirku wuxuu u dhigmaa wax soo saarka ukunta, taas oo ah, shimbirta weyn ee weyn, bacriminta weyn. Celceliska miisaanka digaaga way kala duwan tahay qiyaastii 3 kg, iyo dabacsanaan - qiyaastii 4 kg.
Hilibka shimbirahan aad u dhadhan fiicanmidab madow. Dumarka 'dareenka hooyada' waa mid gebi ahaanba maqan, tan iyo xayawaankani waxaa loo adeegsaday hab macquul ah.
Xayawaanka buuggan waa in loo qoondeeyaa qolal ballaaran oo xayawaanka laga ilaalin doono isbeddelka cimilada. Ha u oggolaanin isbeddelka heerkulka guriga hoyga, waa inaad sidoo kale si dhow ula socotaa heerka qoyaanka.
Dhirta yaryar ee yaryar waxaa lagaga hortagi karaa qoyaan iyo qabyaalad. Waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo shanlada xoolaha dufan leh ka hor intaadan soconin jiilaalka si looga hortago xakamaynta.
Waa muhiim inaad si joogta ah ula socotid dhallinyarada oo aad u qaadato xulasho joogto ah. Cuntada loogu talagalay guurka noocan ah waa mid la mid ah dhalinyarada noocyada kale. Siinta shimbiraha yar yar waxay u baahan yihiin ukunta dufanka leh iyo hadhuudh la burburiyo.
Waqtiga la joogo, cagaarka la jarjaray, siriyalka qamadiga, cuntada lafaha, karootada, xididdo, iyo khamiir waa in lagu daraa cuntada. Dufcinta dhallinta Dhalinyaro yar yar fududahay.
Xayawaannada qaangaarka ah waxay u baahan yihiin in la quudiyo cuntada oo ay ku jiraan fitamiin badan iyo borotiinka si sahlan loo cuno. Ku habboonaanta cuntadan caadiga ah. Sidoo kale waa suurad wacan in la siiyo shimbiraha ciid, taas oo hagaajin doonta hababka dheef-shiidka.
Digaagga iyo dabaqyada yaryar ee Minorca waxay ku haboon yihiin deyrka gurigaaga. Shimbirahaasi ma siin doonaan dhib badan.